1. Kule mihla, ukubonakala kobuso Okanye ubuso be-V-chef Nokuba ungayijonga njani, ijongeka njengoku Thatha imifanekiso emihle njengePangpuri Njenge superstar Iphupha lolutsha Abantu abaninzi bajongana nengxaki yobuso obudumbileyo. Ikwabizwa ngokuba "bubuso obukhulu" obubangele ixhala Okanye abanye abantu bayaphathwa ukuba baphulukane nokuzithemba ekuthatheni imifanekiso okanye ebomini Namhlanje sineengcebiso ezintle zokukunceda ufumane imilo entle yobuso kunye nendlela yokulahla ubunzima bomzimba obuqinisekisa ukuba nabani na angakwenza ngaphandle kobunzima.
2. Zilolonge izihlunu zobuso rhoqo, imithambo elula enokwenza emini. Okanye ngaphambi kokulala ngexesha lokufuna ukuphumla Kubalulekile njengendlela yokunciphisa ubunzima bomzimba. Ungayenza ngokwakho. Kukho amanyathelo alula:
3. Qala ngokubeka iintende ngobunono kuzo zombini iitempile. Emva koko bamba amazinyo ngokuqinileyo ukuze wenze imihlathi iqine. Cinezela intende yesandla sakho ukuze ujikeleze itempile ibe sisangqa esincinci 3 kwaye kamnandi ukuze uve izihlunu ziphumle.
4. Qhubeka ngesimo sesibini Qala ngokubeka isalathiso, esiphakathi kunye nemisesane ngobunono kumacala omabini eentsini zethu. Emva koko uncuma ngobunono, ucofe ngobunono yonke iminwe emithathu esidleleni, bamba imizuzwana emi-5, uze uphinde amaxesha ali-10 ngaphezulu.
5. Masiqhubeke kwindawo yesithathu. Vala umlomo ngesandla esiphambili Emva koko yenza izidlele zikhukhumele Emva koko hambisa umoya emlonyeni esidleleni sasekhohlo. Yiya esidleleni sasekunene, wenze ukujika okungama-10, ukuphumla.
6. Indawo yokugqibela kukuncancisa zombini izidlele emlonyeni wakho kwaye ubambe umlomo wakho imizuzwana emi-5. Yenza i-10 ujikeleze ubuye umva kwindawo nganye ukongeza ekubeni kulula ukuyenza. Ngaphandle kwezixhobo ezinzima Ukuba kwenziwa rhoqo Kwakhona kunceda ukunciphisa amafutha ebusweni Nciphisa ubuso obunamanqatha, uguqule ube sisihlunu, ubume ngendlela ngendlela elula Kubalulekile, ungalibali ukuyenza ngokudibene nokuzilolonga rhoqo.
7. Sela amanye amanzi Kwanele ukuhlangabezana neemfuno zomzimba, amanzi ayimfuneko njengendlela yokunciphisa ubunzima bomzimba. Kuba idala ukutsha Nceda inkqubo yokwetyisa Kwaye gcina iiseli zalo lonke ilungu lomzimba zintsha kwaye zisebenza ngokwesiqhelo Abantu abaninzi abayiqondi kakuhle loo nto Ukusela amanzi amaninzi Ingabangela i-edema yobuso kunye nomzimba Yeyiphi enyanisweni Ukusela iiglasi ezi-6 ukuya kwezi-8 zamanzi acocekileyo ngosuku, ngakumbi ngaphambi kokutya ngesandla. Nyusa iglasi epheleleyo yamanzi okusela Ukongeza ekuncedeni ukunciphisa umzimba Ukuhlaziya umzimba Yitya ukutya okuncinci Ikwachaphazela ukutsha komzimba ngokunjalo
8. Nciphisa ukufunxa kwakho iziselo ezinxilisayo kunye neziselo ezinxilisayo. Imigca yeqela kufuneka ihlengahlengise ubomi bayo Ufuna ukuba nobuso obuhle ngokulinganayo Kungenxa yokuba utywala bunyibilikisa umzimba Kwaye kubangela ukudumba kobuso Kude ulusu lungakhanyi, sela kancinci, kodwa uyonwabele imeko-bume. Impilo entle iyaphola
9. Khathalela ukutya kunye nokuphumla. Ngaphezulu kwako konke ngaphandle kweendlela zokulahleka kobunzima Ukukhetha ukutya okunefayibha Kwaye iprotein elungileyo ibalulekile Yongeza iivithamini kwiziqhamo ezisempilweni ezifana neeapile, iguava okanye iziqhamo zesitrasi ezineswekile encinci. Kubalulekile ukuba uphumle ngokwaneleyo. Kulungile kulusu nakwimpilo. Kwaye uphile ngokuqonda kwehlabathi Soloko uzidibanisa ngokwakho amandla, akunzima, jonga nje kwaye ukhumbule ngobomi bakho. Zama ukuzisa iindlela zokulahleka kobunzima ebusweni esincomela ukuba sizibone. Ukuba nobuso obuqaqambileyo nobuso